China Steam moto okpomọkụ ihe mmetụta Manufacturer - Ogo Steam moto okpomọkụ ihe mmetụta Nkwupụta - Testeck Co., Ltd.
.Lọ > Ngwaahịa > Ike ọdụ okpomọkụ ihe mmetụta > Steam moto okpomọkụ ihe mmetụta
Steam tobaim ọsọ ngwa njikọ okpomọkụ mmesho
Turbine mmanụ nloghachi okpomọkụ na oyi mmanụ okpomọkụ tumadi na-eji thermal eguzogide mgbaàmà nnyefe, bimetallic temometa na-egosipụta na ntụpọ, ọ na-atụ aro iji mgbochi vibration na mgbochi leakage Ọdịdị iji hụ ogologo oge kwụsie ike nke okpomọkụ mmesho.
Steam tobaim mmanụ nloghachi usoro okpomọkụ mmesho
Steam turbine ahụ okpomọkụ mmesho
Ihe mgbochi ihe nkedo nke mgbidi na-agụnyekarị mgbidi dị n'ime na mpụga nke mgbatị ahụ dị elu, na nke dị n'ime na nke dị n'èzí nke mgbatị dị n'etiti.
Steam tobawanye uzuoku okpomọkụ okpomọkụ
Ihe ntụgharị nke uzuoku uzuoku bu ihe nlebara anya nke okpomoku nile, nke gunyere isi uzu oku, oku uzuoku na ngalaba oku di oku, na uzu oku di na ngalaba oyi.
Testeck bụ otu n'ime ndị ọkachamara na ndị nrụpụta Steam moto okpomọkụ ihe mmetụta na China. Biko nweere onwe gị ịzụta nnukwu ogo Steam moto okpomọkụ ihe mmetụta dị na ngwaahịa ebe a wee nweta nkwupụta sitere na ụlọ ọrụ anyị. Ọzọkwa, ahaziri ọrụ dị.